ပွဲသွားမယ် ဟွဲ [膾] စားမယ် (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ပွဲသွားမယ် ဟွဲ [膾] စားမယ် (၂)
ပွဲသွားမယ် ဟွဲ [膾] စားမယ် (၂)
Posted by nigimi77 on Dec 4, 2011 in Food, Drink & Recipes | 12 comments
သားစိမ်း ငါးစိမ်း အကုန် ကျလိန်းမယ်
膾 = 회 = ဟွဲ
ငဇာဂီ တို့အရှေ့ ကျွန်းမှာတော့ ဆာရှီမီ (刺身) လို့ ခေါ်ပါသဗျား ။
အဲ့သဟာက ငါး ၊ ခရု ၊ အမဲသား ၊ အသည်း စတာတွေကို အစိမ်း အတိုင်း ပါးလွှာအောင်လုပ်ပြီး စားကြတယ် ။
အရှေ့ ကျွန်းမှာတော့ ဆာရှီမီလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ငါးစိမ်း စားတာကို မျက်လုံးထဲမှာ တန်းမြင်လောက်အောင်ကို
ပုံမှန် စားသောက်ကြပြီး များသောအားဖြင့် အရက်သောက်ရင်း အမြည်း အဖြစ်နဲ့ငရုတ်ဆီ ၊ ဆား ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် 
၀ါဆာဘီ ယမ်းစိမ်း စတာတွေနဲ့တို့ စား ကြတယ် ။
(芝峰類說)ဂျီ ဘုံ ယူ ဆောလ် လို့ ခေါ်တဲ့ ၁၆၁၄ ခုနှစ်က ပြုစုတဲ့ သူတို့ ရဲ့စွယ်စုံကျမ်းမှာ ပါတဲ့ အချက်အလက်တွေကို
ကြည့်ရင် ……တရုပ်လူမျိုးတွေဟာ သားစိမ်း ငါးစိမ်း မစားပါ ။ ခြောက်သွေ့ တဲ့ အသားဖြစ်နေတောင်မှ ကျက်အောင် ချက်ပြီးမှ
စားကြသလို ….ဂိုရ်ယော (ကိုရီးယား) တွေ သားစိမ်း ငါးစိမ်း စားတာကို ကြည့်ပြီး ရယ်မောကြတယ် ….. ဆိုတဲ့
အချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကိုရီးယားတွေဟာ ဟိုးအရင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက သားစိမ်း ငါးစိမ်း ကို နှစ်ချိုက်ပြီး စားသုံး
ခဲ့တယ်လို ဆိုနိုင်တယ် ။
ငါးစိမ်းစားနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး ။ သိပ်ဈေးကြီးပါတယ် ။ ရေထွက် အစားအစာတွေပဲ ရောင်းတဲ့ ဒိုင်သဘောမျိုး ဈေးကြီးတွေမှာတောင်
ငါးတစ်ကောင်ကို မြန်မာငွေ တသိန်းခွဲ ကျော် ပေးရတာတွေရှိပါတယ် ။ ဟွဲ ဆိုင်တွေမှာ အဆင်သင့်စားတာလည်း ကုန်ကျစားရိတ် များ
ပေမဲ့ ပစ္စည်းစုံတာပေါ့ ။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာများ စားသုံကျတဲ့ ငါးကလေး က လတ်ဆတ်တော့ ချိုနေတာပဲ ဆိုတာက တကယ်တမ်း
ဟင်းခတ်မှုန့် တွေ ၊ အချိုမှုန့် တွေရဲ့အရသာပဲ ဖုံးလွမ်းနေတာကြောင့် နဂိုက ငါးနဲ့လတ်ဆတ် ချိုမြတဲ့ အရသာက မရှိတော့ပါဘူး ။
ငါးစိမ်းကို ရေချို ငါးတွေ စားတာ ရှိပေမဲ့ အများအားဖြင့် ပင်လယ် ငါးတွေက ပိုပြီး ဈေးကြီးသလို အဟာရဓါတ် ၊ အနံ့၊ အရသာ နဲ့ 
တူနာ (Tuna) ငါးစိမ်းကို အလွာပါးလေး ဖြစ်အောင် လှီဖြတ်ပြီး ၀ါဆာဘီ ယမ်းစိမ်းဖျော် မှာ နှစ်ပြီး လျှာပေါ်တင်ထား လိုက်ရင်
ငါးရဲ့ မသိမသာ စူးရှတဲ့ အနံ့ သင်း ၊ အလွန် တရာ စိမ့် လှတဲ့ အရသာ ၊ အဲဒီနောက်မှာ ဖန်တန်တန် ရှတတ အရသာ အနည်းငယ်နဲ့ 
၀ါဆာဘီ ရဲ့အလွန်ကို ဖော်ပြရခက်တဲ့ အရသာထူးနဲ့မျက်စိမှိတ် အရသာခံပြီး နောက်မှာ ရှမ်းဆန်လိုမျိုး ထမင်းလုံး လောက်စာလုံးလောက်
ကလေးကို ပစ်သွင်းလိုက်ရင် ဖြင့် သဘာဝကြီးက ပေးတဲ့ ရသာထူးတွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ဆုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ရေးရင်းနဲ့သွားရည်တွေ ယိုကုန်ပြီ …… စုတ်ခ စုတ်ခ…..
ဝက်သားပြား တစ်ခု ကို ထမင်းထည့်လိပ်ပြီး
ဘီယာနဲ့ သာ မျှောတော့ ကိုယ့်လူ
ဘယ့်နှယ့် ကျုပ် နာမည်ရီးက အစမှာ ပါရတာတုန်း…
(အဲ့လို လျောက်မန့်နေရရင်တော့ အိပ်ရလာ့မှာဟုတ်ဝူး….အော်.. ရွာ့ချဉ်ဖတ်ဖစ်နေပါပေါ့လား….)
ကျုပ်ဖြင့် ….ဆာရှိမိ သိပ်မစားဘာဘူးဗျာ ….
၀စဘိ …. အရသာ ကတော့ ကိုရင်ပြောတာ အတိအကျဗျို့…
အမှန်ဘဲ …ချရေးပြခက်တာ အဟုတ်…
အဲ့သည့် အနှီ ၀စဘိ နည်းသွားရင်သော်လည်းကောင်း
များရင်သော်လည်းကောင်း အထာ မကျ ဖြစ်ရတာချည်းကိုခည ……
ဂီဂီတော့ တခြားအသား သိပ် ပြသနာမရှိပေမယ့်. ………….
baniku တော့ ရ၀ူးရယ် ….ညှီဒယ်. ……၀စဘိ လည်း ကယ်နိုင်ဝူး..
ပီးတော့ မြင်း ကိုလည်း စားစရာအကောင်လို့ မမှတ်တာလည်း ပါမယ်ထင်တယ်…
ဟို ဇန်ဝါဒ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ပီး.. ရေ ဘွဲ ၀ါးစားတဲ့ ..၄-၅ချက်ဆိုရင် သေပါတယ် ဆိုတဲ့လူရီးတော့ မသိဝူး……
အစိမ်းဆိုလို့ လူသားကလွဲရင် မစားဖူးပါ…။ (နဲနဲတော့ နောက်ပါစေ တပ်မ-ကြီးတော့ မသိဘူး နေ၀န်းနီက ခင်လို့နောက်လိုက်တာ…။ ) အရက်သောက်တုန်းကတော့ ကြက်ဖုတ်တို့ ငါးဖုတ်တို့ နဲ့ မြည်းဖူးတယ်…။ ကောင်းလိုက်တာပြောမနေပါနဲ့တော့ …။ ကြက်ကို ရင်ခွဲ ကလီစာတွေထုတ်…. ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိူင်တွေ လှိုင်နေအောင်ထည့်…။ တံစို့ထိုးပြီးမြေမှာစိုက်ထား….။ သံပုံးနဲ့အုပ်ပြီး အပြင်ကနေ ကောက်ရိုးမီးနဲ့ရှို့ အနံ့လေးထွက်လာရင် သံပုံးလေးလှပ်ပြီး မြည်းကြတာ…။ မကျက်တစ်ကျက်ပေါ့….။ ငါးကျတော့လည်း ဒီအတိုင်း လတ်လတ်ဆပ်ဆပ် မျှားလို့ရလာတဲ့ငါးကို ရွံ့နဲ့အုံ မီးဖိုထဲ ပစ်ထည့်လိုက်တာ…။ ရွှံ့ခြောက်သွားရင် ပြန်ထုတ် ရွှံ့ခွာပြီး လတ်လတ်ဆပ်ဆပ် စား…။ အဲ အရက်နဲ့မြည်းတာ………. ။ အဲဒိလို ပဲစားဖူးတယ်…။ သူများအသား ကောင်းကြောင်းပြောနေရင် ကျုပ်လည်း သွားရည် ကျနေပြီ……..။
ဂီလည်း အသားစိမ်းစားဂျင်နေဒါ …..
ဟီး …….ငတ်နေတာ ကြာဘီဂိုး …
ပြန်လာရင် ၀ယ်ကျွေးနော် …. နော့် ကရင်အီးတီ
ဂြိုလ်သားလည်း ငတ်နေတာ ၁၁လကျော်ပီ။ ခုပြန်ရောက်ရင် စားမယ့်ဟာတွေ စာရင်းရေးနေတာ ဂီဂီ ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်ဆို စားလို့ သောက်လို့ ဝနေလောက်ပြီ ဂီဂီ ဝယ်ကျွေးခိုင်းတဲ့သူ မှားနေသလိုပဲ။ အော်မေ့ဂိုဏ်းက အငယ်ဆုံးလေးကို ဝယ်ကျွေးခိုင်းရမှာ ဂိုဏ်းချုပ် ဖွားဆူးကိုတော့ သွားဝယ်မကျွေးခိုင်းနဲ့သူကကပ်စီးကုပ်
ြုပန်လာရင် ငဖွတ်ကျား ဆိုတဲ့ဟာ ကင်ကျွေးမယ်..
ဘီအီးနဲ့စိမ်ပြီးတော့ဆွဲ..
ငဖွတ်ကျား ကင်ကျွေးရင် ကျုပ် အတွက် ဖင်ဆီဘူးလေး ချန်ထား ကပေါက်ဖော် ။
ဟိုတစ်ခါ ဂျာနယ်ထဲပါတဲ့လူလို ဦးနှောက်ထဲမှာလောက်တက်နေရင် ဒွတ်ခ အကြိမ်တစ်သန်းဘဲ
မှန်ပါတယ်…။ဆာရှိမိ က.. ငါးတမျိုးထဲမဟုတ်ပါဘူးနော..။
ဘဆရှိဆိုတဲ့.. မြင်းသားလည်း ဆာရှိမိရှိပြီး.. ဈေးကြီးတဲ့ ဆာရှိမိတမျိုးပေါ့..။
ကြက်သားလည်း.. ရင်ပုံအရိုးနုနားက အသားလေးလွှာပြီး ဆာရှိမိလုပ်စားတတ်သေးတယ်..။
၀က်တော့ လုပ်ကြတာ မတွေ့မိဖူးဘူး..။
ငါးမှာ.. အဓိကဆာရှိမိလုပ်စားကြတဲ့.. အသားနေရာတွေရှိတယ်..။
အသားထဲ.. အဆီ..အသား.. ပါဝင်မှုကြည့်ပြီး…ဈေးတွေကွာသွား..အရသာကွာသွားတာပါ..။
အရသာတွေလည်း.. အမည်ပေးထားတာ.. မစုံသေးဘူး..။
၀စဘိအရသာကို.. ပေးထားတာမရှိသလို..။ ဆာရှိမိရဲ့.. ထိပ်တန်းအသား..အိုးတိုရိုရဲ့.. အရသာကိုလည်း.. အမည်တတ်ထားတာမရှိဘူး..။
အောက်မှာ.. တူနာ(မာဂုရိုး)ကို. ဆာရှိမိလုပ်ရာမှာ..အသားနေရာခွဲပုံတချို့ ကူးတင်ပေးလိုက်ပါကြောင်း..
Maguro (mah-goo-roh) is the Japanese term for bluefin tuna, perhaps the best known and most commonly eaten fish in all of sushi dining. Used in many rolls, but often seen by itself, what is now the old stand-by was not always the most popular item on the menu. While currently suffering from incredible demand, tuna was, until the 1970’s,asport fish commonly known as “horse mackerel” and sold to companies for cat food or thrown away. Now, its fatty belly meat, known as ‘toro’ is one of the more expensive items on the menu, prized for its taste, texture, and scarcity. Tuna has comealong way from beingafish the samurai considered unclean and would not eat, to one of the most popular fish in Japan, and the world around.
Tuna served in restaurants is generally one of two different species, the bluefin tuna (Thunnus thynnus), traditionally known as ‘maguro,’ which is usually fairly lean, and the yellowfin tuna (Thunnus albacares), known as ‘ahi’ (ah-hee), which isafattier species. Yellowfin tuna may also be labeled ‘maguro’ but more often than not, if you see maguro it will be bluefin tuna. Tuna sushi is further broken up into subtypes, based on the fat content.
ကိုပေါက် မန်း ပြောတာ အဲဒီ ပုံကြီး ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
ပုံကတော့ အတုကြီး.. ဒါပေမဲ့.. အဲဒီ ပိုစ်ထဲမှာတော့ မန်းဖူးတယ်။
သံကောင် အရှည်တကောင်တော့ ဂျပန်ကြီး ဗိုက်ထဲက ထွက်ဖူးတယ်လို့တော့ ဖတ်ဖူးတယ်။
There you go, just click on the link below forafull explanation andapicture. The largest ever recorded inahuman being was, I believe, 20 m (about 66 feet), but I cannot remember where I saw the reference, so I cannot provideasource.
သေချာ ဖတ်ချင်ရင်တော့ http://myanmargazette.net/26772/health-fitness/food-drink မှာ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဘွားဆူး မန့် ထားတာကို ဖတ်ပြီး အောက်က ကွန်မန့် ကိုလဲ သဘောကျသဗျား ။
နောက်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ ပုဇွန် အစိမ်းသုပ် ဆိုတာ အတော်လေးကြိုက်ကြတယ် ။
ကျွန်တော့ အထင် ပုဇွန်က ငါးထက် ပိုညှီမယ် ထင်တာပဲ ။
အလွန်အကြွံဆိုရင် ဘယ်အရာမှ မကောင်းဘူးပေါ့ ။ တန်ဆေးလွန်းဘေး ဆိုသလိုပါပဲ ။
ကျွန်တော် တခုပြောချင်တာက အစာကို စားသုံးရာမှာ ကိုယ်စားမည့် အစာရဲ့အဟာရတန်ဘိုး
ဘယ်လောက်ပါတယ် ဆိုတာ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ရိုးရာပါးစပ်ကတော့ အချိုမှုံ့ 
အရသာကို ရရင်ပဲ မြိန်ရေရှက်ရေ ဖြစ်နေတာကြောင့် မတူတဲ့ အသိလေးတွေ ပေးချင်တာပါပဲ ။